China nharembozha fekitori uye vagadziri | SJJ
Yedu fekitori inopa akasiyana siyana efoni mbozha dzakagadzirwa nemisiyano yesimbi zvinhu. Matare efoni esimbi anowanikwa ne2D kana 3D dhizaini. Cartoon chimiro kana tsika mascot uye logo zvese zvinoshanda.
Kune akasiyana masitayera emashiripiti Pretty Shiny anogona kuburitsa. Runhare rwefoni runowanzo sunganidzwa nharembozha kuburikidza neyekubatanidza foni kana silicone plug, mamwe mafoni anogona kunge aine gomba rekusungira iro tambo inogona kusungirirwa uye tambo dzefoni dzinoshandawo mamwe mabasa sekuchenesa skrini. Kunze kwerunako,varidzi vefonizvinopisa zvikuru. Madumwa anokwanisa kuwedzerwa pane anobata kuti riite rakanaka uye riite, Pretty Shiny anotamba chinzvimbo mukuita kuti mazango ave nehunhu. Kunze kwesimbi renji, isu tinogona zvakare kupa PVC, silicone, dehwe, embroidery yekuvagadzira. Mahara emifananidzo sevhisi uye iripo sampuli zviripo zviripo. Kana iwe uine zvaunofarira, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Huripo anoumba dziripo
Charm kusungira: madhaimani, mwenje we LED, kuchenesa skrini, kupukuta skrini, cheni yebhora
Kushongedza: yakaturikwa pamakiyi, nhare mbozha, makamera, mabhegi, malaptop
Yakagadziriswa saizi, mavara, marogo.
Pashure: Waini Mazango
Zvadaro: Mota Grille Mabheji & Mota Zviratidzo
Nhare mbozha Bhandi
Runhare Charm Bhandi
Kisimusi Inovhara Runhare Inobata
Antibacterial TPU Nhare Mhosva